Jidhka haweenka iyo uur isku diyaarinta..Goorta ninka raga iyo haweenka ay galmoodaan, shahwada raga ayaa gasha siilka haweenka, oo ugasii gudubta ilma-galeenka - iftineducation.com
iftineducation.com – Jidhka haweenka iyo uur isku diyaarinta..Goorta ninka raga iyo haweenka ay galmoodaan, shahwada raga ayaa gasha siilka haweenka, oo ugasii gudubta ilma-galeenka
Jidhka haweenka iyo uur isku diyaarinta..Goorta ninka raga iyo haweenka ay galmoodaan, shahwada raga ayaa gasha siilka haweenka, oo ugasii gudubta ilma-galeenka,,,,,,Bishiiba mar, isbadello ayaa ka dhaca haweenka jirkooda gudahiisa taasoo suurtogeliso in ay uur ku yeelato.
1. Marka koowaad, ukun canugcunug noqon karta ayaa laga soo riixaa qanjirada dhalmada. Canuga Jirku wuxuu leeyahay laba ugxan side. Waxay yaaliin halka ukumaha ay ku sameysanto.
2. Ukunta waxay u dhaqaaqdaa dhanka ilma-galeenka iyada oo tuubada ku socota.
3. Goorta ninka raga iyo haweenka ay galmoodaan, shahwada raga ayaa gasha siilka haweenka, oo ugasii gudubta ilma-galeenka. • Haddii shahwada iyo ukunta haweenka ay kulmaan, canug (cunug) ayaa ka dhasha. • Haddii shahwada ukunta aysan kulmin, ukunta dibada ayay uga soo baxdaa haweenka jirka iyada oo soo raacda dhiigga caadada (sidoo kale loo yaqaano caado ama caadada).